Moa ve mbola mendrika ampiasaina amin'izao fotoana izao ny fitaovana fanontana bakalorea?
Mbola manontany tena ve ianao raha mendrika ny mampiasa fitaovana fanodinan-drakitra ankehitriny, na tsia? Ny valiny tsotra dia - eny, izy ireo. Ary misy antony marobe hanamboarana izany - ny fanaovana fehezan-dalàna mety dia tokony ho an'ny tranonkala tsirairay. Farafaharatsiny noho ny fanamarihana amin'ny SEO White-Hat, dia tena sarobidy tokoa ry zareo. Noho izany, avelao hiatrika izany - ny fonosana fanodinana backer dia nitazona ny heriny tany am-piandohana tamin'ny taona 2017, ary antenaina fa ny anjaran'ny liona amin'ny seo manam-pahaizana SEO dia mitazona ny maha-zava-dehibe azy amin'ny hoaviny mialoha. Izany no mahatonga ahy eto ambany ny andalavako fohifohy ny soso-kevitra mety indrindra momba ireo sora-baventy eo an-toerana, ny famoahana ny gazety, ny tambajotra syndication, ary ny hevitra "SEO ratsy" mandrisika ny mombamomba ny mpanaraka ankehitriny dia miasa bebe kokoa.
Alohan'ny zavatra hafa dia tsy tokony ho tsinontsinoavina velively ny fepetra fandraharahana eo an-toerana, indrindra mikasika ny ankamaroan'ny tetikasa amin'ny aterineto na ny orinasa madinika. Satria, na dia ny fivilian-tsoratra feno fahefana sy ambony aza dia mety tsy ho tonga amin'ny Google amin'ny fotoana fohy. Nahoana? Ny olana dia matetika ny fampiasana ny liona amin'ny famaritana ao anaty votoaty mifandraika matetika amin'ny fehezan-teny matetika. Ary nahoana ianao no tsy tokony handray tombony ho an'ny mpifaninana akaiky anao ary hitarika anao? Noho izany, ilaina ny fampiasana fitaovam-pifandraisana bakalorea satria farafaharatsiny noho ny tranonkalanao mila sokajy voasokitra, nefa tsy misy mahita azy ireo avy amin'ny motera fikarohana.
Ny famoaham-baovao amin'ny gazety
Ny zavatra dia saika isaky ny rohy rehetra avy amin'ny famoaham-baovao avoakan'ny gazety dia ny fitenenana fotsiny,. Nahoana? Satria fotsiny hoe ny fitaovam-pikarohana lehibe toa an'i Google dia mahalala fa misy afaka mandoa vola amin'ny fifamoivoizana amin'ny famoahana gazety. Vokatr'izany, afaka mahazo mailaka an-jatony ianao amin'ny alàlan'ny famoaham-baovao amin'ny alàlan'ny haino aman-jery ambony na tranokala vaovao. Na izany aza, iray na roa monja amin'izy ireo no azo raisina ao amin'ny lisitry ny SERPs ao amin'ny Google. Ary eto ny vahaolana - ny vokatra indrindran'ireo rakitra rohy dia mety ho tsara kokoa rehefa vita miaraka amin'ny fitaovana fanontana bakalorea toy ny Instant Links Indexer, ary koa ny Backlinks Indexer. Efa nanandrana azy ireo aho, noho izany dia azonao atao ihany ny manapa-kevitra hoe iza no tokony hofidiana.
Mampalahelo fa mety haka fotoana be loatra ho an'ny Google sy ireo fitaovana hafa hahitana ireo backlinks vao haingana na dia amin'ny tambajotra goavana toy ny Tumblr, Blogger, sns.Izany no antony inoako fa ny serivisy fanodinan-drakitra any aoriana dia tena tsara. Raha ny tena izy, ny tombontsoa ara-barotra marina amin'ny fananana ireo loharanom-pejy voatanisa ireo dia tokony ho anisan'ny tombontsoanao manokana, sa tsy izany?
Fihetseham-po mahazatra raha misy mpiloka iray manaparitaka fotsiny ny tranonkala iray manontolo noho ny mpanohitra azy kokoa. Midika izany fa afaka mampiasa mora foana ny asa soratranao manokana ianao mba hamoahana azy ireo toy ny tranonkala klone any amin'ny toerana hafa miaraka amin'ny pejy PageRank, na fahefana ambony. Amin'izany fomba izany, toa ny tranonkalan'ny tranonkala fotsiny no nanodikodina ny votoatin'ny pejy manontolo, fa tsy ny tena anton-javatra simba. Izany no mahatonga anao ho tsara kokoa ny pejy misy anao amin'ny endri-tsoratra haingana kokoa noho ireo jiolahy mpanakorontana mihetsika toy ny kopia kopia fotsiny mba hangalaran'ny ampahany amin'ny asa mafy ataonao. Farany, ny fiantraikany mety ho an'ny "SEO ratsy" dia tokony ho ny resy lahatra tanteraka amin'ny filazana azy indray - ny fikarakarana hikolokolo ny endri-pifaneranana eo amin'ny backlinks dia mbola tokony ho an'ny tranonkala rehetra Source .